कागजरहित स्वास्थ्य सेवा: एक नमुना बयालपाटा अस्पताल :: पूर्ण बहादुर खड्का :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कागजरहित स्वास्थ्य सेवा: एक नमुना बयालपाटा अस्पताल
पूर्ण बहादुर खड्का शनिबार, फागुन २८, २०७८, ०७:००:००
अछाम- सुचना प्रविधीको तीव्र विकाससँगै हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकास तीव्ररुपमा भइरहेको छ। कार्यालय वा व्यक्तिगत रुपमा हुने हरेक काममा छिटोछरितो, प्रभावकारी तथ्यांक तथा सजिलै सबैको पहुँचका लागि विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग बढ्न थालेको हो।
सरकारले स्वास्थ्यमा डिजिटलाइजेशन गर्ने भनेर विभिन्न टुलहरुको प्रयोग गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन।
सुरुमा सबै प्रकारका रिपोर्टिङ र रेकर्डिङको काम कागजमै भएपनि पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा ईलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेर्कडको प्रयोग बढ्न थालेको छ। नेपाल सरकारले रिपोर्टिङ र रेकर्डिङको लागि डिएचआईएस २ -DHIS2_ को प्रयोग गर्दै आइरहेपनि त्यसमा हरेक पटक कागजमा तयार पारेको तथ्यांकलाई इन्ट्री गर्नुपर्दछ। त्यस्तै औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्थापनको लागि भने ईएलएमआईएस -ELMIS_को प्रयोग गरिरहेको छ। तर त्यो सबै क्षेत्रमा प्रयोग भने भएको पाइँदैन।
देशका केही अस्पतालमा आफ्नै लगानी तथा साझेदार संस्थाको सहयोगमा भने कागजरहित स्वास्थ्य सेवा दिने प्रयासहरु भइरहेका छन्। तर नेपालको पिछडिएको जिल्ला अछामको बयालपाटा अस्पतालले भने कागजरहित स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ। न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा संचालन भइरहेको अस्पतालले आज भन्दा ७ वर्ष अघिदेखि नै कागजरहित स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ।
नेपालमै पहिलोपटक न्याय हेल्थ नेपालले एकिकृत (ईएचआर) विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणालीको सुरु सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछामबाट गरेको थियो। अछाम जिल्लामा संस्थाद्धारा संचालित बयालपाटा अस्पतालले सन् २०१५ मा पहिलोपटक यस्तो विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणालीको व्यवस्थापनमा सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा तथा अभिलेखका कामकाजलाई कागजरहित बनाई रेकर्ड राख्दै आएको छ।
सुरुमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली (ईएचआर) नाम दिए पनि हाल (नेपाल ईएचआर) भनेर नामाकरण गरिएको बयालपाटा अस्पतालका बरिष्ठ सुचना प्रविधि अधिकृत दिपक बिष्ट बताउँछन्। न्याय हेल्थ नेपालले सो प्रणालीलाई देशका अन्य अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामासमेत विस्तार गर्दै आइरहेको छ। संस्थाको व्यवस्थापनमा संचालित दोलखाको चरिकोट अस्पताल, अछाम जिल्लाको चौरमाण्डौँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली ईएचआरको प्रयोग भईरहेको बरिष्ठ ईएचआर सहायक रमेश महरले बताए। सो विद्युतीय अभिलेख प्रणालीको प्रयोग नुवाकोटमा रहेको त्रिशुली सरक अस्पतालले समेत गरेको छ।
ईएचआर प्रभावकारी तथ्यांक र काममा सहजताका लागि विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली राम्रो रहेको भन्दै कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, गोरखा जिल्लाको आँमपिपल अस्पतालले पनि प्रयोगमा ल्याएको छ। सम्पूर्ण रुपमा आमपिपल अस्पतालले पनि अहिले कागजरहित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ। न्याय हेल्थ नेपालसँगको साझेदारीमा आमपिपल अस्पतालले नेपाल ईएचआर विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली लागु भएको ईन्जिनियरिङ प्रबन्धक दिपक न्यौपानेले बताए।
यसै आर्थिक वर्षबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि न्याय हेल्थ नेपालसँग समन्वय गर्दै प्रदेश अन्र्तगतका जिल्लाहरुका अस्पताल तथा स्वास्थ्य सस्थामा नेपाल ईएचआर लागु गर्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेशका रुकुम, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, दैलेख र हुम्ला जिल्लामा पनि नेपाल ईएचआर लागु हुने भएको न्यौपानेले बताए।
नेपाल ईएचआर लागु भएका अस्पतालमा उपचारका लागि पहिलोपटक आउने बिरामीलाई दर्ता नं. सहितको एक कार्ड दिइन्छ। त्यसपछि कुनै कागजको प्रयोग नगरेरै सेवा दिन सुरु गरिन्छ। अस्पतालले बिद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख ईएचआर पद्धति मार्फत बिरामीहरुको सबै विवरण ईएचआरमा अभिलेखीकरण गरिएको हुन्छ।
बिरामीलाई जाँच गरिसकेपछि चिकित्सकले उनको रोग तथा निदानको बारेमा सबै कुरा कम्प्यूटर मार्फत ईएचआर मा इन्ट्री गर्छन सोही अनुसार बिरामीलाई कस्तो उपचार गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा एक्सरे, प्रयोगशाला तथा अन्य फाँटलेसमेत सजिलै हेर्न सक्छन। र यसरी बिरामीको उपचारपछि औषधि लिनलाई समेत कागजकाे प्रयोग हुदैँन, डाक्टरले औषधि ईएचआरमै लेख्छन र त्यसको रेकर्ड सिधै औषधि वितरण कक्षमा ईएचआरकै अर्को कम्पोनेन्टमा जान्छ त्यसपछि औषधि वितरण कक्ष फार्मेसीबाट औषधि दिईन्छ। यसरी औषधि वितरण गरेपछि मौज्दातबाट क्रमश घटेर जान्छ। महिनामा के कति औषधि खर्च भयो भनेर सजिलै तथ्यांक निकाल्न सकिन्छ।
फार्मेसी र भण्डार शाखामा औषधि लगायत अन्य सामाग्रीको मौज्दात के कति छ भनेर सजिलै हेर्न सकिन्छ भने म्याद सकिएका औषधि तथा सामाग्री के कति छन् भने पनि सहजै रिपोर्ट निकालेर काम गर्न सकिन्छ। यस्तै वर्षभरी खपत भएको मात्रा बाट कुन वर्षमा के कति खर्च हुन्छ भनेर पनि जानकारी लिएर वार्षिक रुपमा खरिदका लागि सजिलै काम गर्न सकिन्छ।
यी सबै कुराको रेकर्ड सधैँभरीको लागि अभिलेख भएको हुन्छ र अर्कोपटक आउँदा पहिलोपटक दिएको कार्ड नम्बरले सबै कुरा सजिलै हेर्न सकिने प्रावधान बनाइएको छ। बिरामीलाई भविष्यमा चाहिने रिपोर्ट लगायतका सबै प्रकारका तथ्यांक सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। न्याय हेल्थ नेपालका अनुसार यो अभिलेख संस्थाले निर्धारण गरेको नेटवर्कको सर्भरमा मात्र सिमित हुने भएकोले बिरामीको तथ्यांक चुहावट हुने सम्भावना हुँदैन।
विद्युतीय अभिलेख प्रणालीले काम गर्न र बिरामीको रेर्कड राख्न तथा भबिष्यमा भइपरी आउने समस्याका बारेमा जानकारी लिन नेपाल ईएचआर प्रभाकारी माध्यम बनेको बयालपाटा अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा मन्दिप पाठक बताउछन्। स्वास्थ्यकर्मीलाइ यसले काम गर्न सहजता बनाएको छ भने प्रविधिमा उनिहरुको व्यक्तिगत विकास समेत बृद्धि हुने डा. पाठकको भनाई छ। अस्पतालले के कति र कस्ता खालका बिरामीको उपचार गर्यो भन्ने कुराको रेर्कड वर्षौ पछिसम्म हेर्न मिल्ने भएकाले यो प्रभावकारी माध्यम भएको उनको भनाई छ।
यो विद्युतीय प्रणालीले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रायलमा गर्नुपर्ने रिपोर्टिङमा समेत सहजता हुने भएकाले देशका अन्य अस्पतालमा समेत यो लागु गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
त्यति मात्रै नभइ यो विद्युतीय अभिलेख प्रणाली ईएचआरले सुचना तथा अभिलेखको अर्को महत्वपुर्ण काम डिएचएसआइ२ को लागि तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनका लागि आवश्यक सबै तथ्यांक समेत ईएचआर मार्फत एकैछिनमा नेपाल सरकारको रिर्पोट टुल डिएचएसआइ२ मा पठाउन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। न्याय हेल्थ नेपालको व्यवस्थापनमा संचालित अस्पतालहरुमा यसको प्रयोग भइ प्रभावकारीताको पुष्टि समेत भइसकेको डा पाठक बताउँछन्।
हाल न्याय हेल्थ नेपालले एकिकृत ईएचआरर/डिएचएसआइ२ प्रणाली मार्फत बिरामीको रेकर्डसंगै मासिक एचआइएमएस प्रतिवेदन समेत यसैको माध्यमबाट रिपोर्टिङ गर्दै आइरहेको छ। जसले गर्दा डिजिटल तथ्यांकमा मानवीय त्रुटी कम हुनुका साथै छोटो समयमै प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रणाली डिएचएसआइ२ पठाउन सफल भएको छ।
डा पाठकका अनुसार नेपालका सबै स्वास्थ्य संस्थामा विद्युतीय अभिलेख प्रणाली लागु गर्न आवश्यक छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 'हस्पिटल म्यानेजमेन्ट स्ट्रेन्थिङ प्रोगाम' मा परिभाषित गरे अनुसार देशका हरेक जिल्लास्तरिय अस्पतालहरुमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत बिरामीको दर्तादेखि अभिलेख राख्नु पर्ने भनिएता पनि हालसम्म उक्त विधि खासै लागू भएको छैन। प्रविधिको विकास र समयको मागसँगै राज्यले समेत यस्तो प्रकारको अभिलेख राख्ने प्रणालीको प्रयोग गर्ने हो भने हरेक प्रकारका तथ्यांक छोटो समयमै प्रयोग गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ। जसले गर्दा दिनहुँ लगाएर कागजी रुपमा रिपोर्ट तयार पारी फेरि सफ्टवयरमा राख्नुपर्ने झन्झटिलो कामको अन्त्य हुनुका साथै समयकोसमेत बचत हुन्छ।
यस प्रकारको विद्युतीय तथ्यांकले प्रयोगकर्ता एवं प्रबन्धकलाई आफ्नो संस्थामा भइरहेका सेवाहरुको जानकारी लिन तथा निगरानी राख्न, ईन्टरनेटको पहुँच भएको ठाँउबाट सजिलै हेर्न तथा विश्लेषण गर्न सकिनेछ। यसका साथै हाल प्रयोग भइरहेको कागजी भण्डारणको लागत कम गर्न र व्यवस्थापनमा हुने कठिनाई समेत हटेर जाने देखिन्छ।
नेपालमा सन १९९३ मा सुरु भएको स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशका १३ वटा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको निगरानी र मुल्यांकन गरिरहेको छ। उक्त कुरा कागजी माध्यममार्फत हुदै आइरहेको छ भने सन् २०१७ बाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एचआइएमएस रिपोर्टिङको लागि डिएचआइएस२ प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। उक्त माध्यमबाट तथ्यांक चित्रण गर्न, रोगहरुको म्यापिङ र अुनुकलित ड्यासबोर्ड बनाउन प्रभावकारी रहेको छ।
ईएचआर विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली के हो ?
सुरुमा ईएचआर नाम दिईएको विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणालीलाई हाल नेपाल ईएचआर नामाकरण गरिएको छ। यो एक खुल्ला श्रोत अन्तर्गतको सफ्टवयर हो। यसले बिरामीको एकिकृत तथ्य, चिकित्सकिय इतिहास, समस्या, प्रयोगशाला रिपोर्ट, एक्सरे तथा भविष्यमा अपनाउनु पर्ने ओषधि उपचार एकैठाँउमा सुरक्षित गर्ने काम गर्दछ।
बिरामी दर्तादेखि सबै उपचार भएसम्मको रेकर्ड एकैठाँउमा सजिलै राख्द्छ र यसरी रेकर्ड गरिएका तथ्यांकलाई एकै क्लिकमा डिएचएसआइ२ प्रतिबेदन सफ्टवयरमा पठाउने काम गर्दछ । यससंगै जोडिएका अरु कम्पोनेन्टले संस्थामा औषधि तथा अन्य सामाग्रीको व्यवस्थापनका लागि काम गर्दछ। संस्थामा के कति मौज्दात छ भन्ने जानकारी र प्राप्त र निकासी, खर्चको विवरणको कामसमेत यसैमार्फत हुने गर्दछ।
समुदायलाई अस्पतालसँग सिधै कनेक्ट
न्याय हेल्थ नेपाललले अस्पतालमा मात्र नभई समुदायलाईसमेत विद्युतीय प्रणालीमा जोडेको छ। समुदायलाई सिधै स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालसँग जोड्नसमेत विद्युतीय अभिलेख प्रणालीमार्फत नै काम गर्दै आइरहेको छ। नेपालइएचआर सँग कमकेयर सफट्वयरलाई एकिकृत गरी समुदायका बिरामीको अवस्था समेत अस्पतालमा जानकारी हुने गरेको छ।
संस्थाले संचालन गरिरहेको सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागु भएका क्षेत्रका बिरामीहरुको रेर्कड सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा नर्सहरुले आफ्नो मोबाईलमा कमकेयरमा रेकर्ड राख्छन्। त्यो रेर्कडपछि सिधै नेपालइएचआर सँग एकीकृत हुन्छ।
जसले गर्दा समुदायमासमेत के कस्ता समस्या भएका बिरामी छन्, जोखिम के छ, उनिहरुलाई कुनबेला कस्तो उपचार र औषधि दिनुपर्ने हो भन्ने कुराको तथ्यांक समेत विद्युतीय प्रणालीमार्फत नै जानकारी हुने गरेको छ।
नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा न्याय हेल्थ नेपालले व्यावस्थापन गर्दै संचालन भइहरको अछाम जिल्लाको बयालपाटा अस्पतालले बिरामीहरु अस्पताल प्रवेशदेखि निको भएर घर नजाँदासम्म सबै प्रकारका सेवा नि:शुल्क रुपमा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।